Nampiverina ny adihevitra amin’ny fanaovana afomanga mavesatra ny fahafatesana kangoroa ao Trinite · Global Voices teny Malagasy
"Tsy tafavoaka tao amin'ilay dona ny iray amin'ny kangoroa..."
Voadika ny 23 Septambra 2019 14:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Svenska, English
Pika iray avy amin'ny lahatsary navoaka tao amin'ny pejy Facebook Emperor Valley Zoo, mitondra ny lohateny hoe “In Memory of Joey” [ho fahatsiarovana an'i Joey]. Maty ity kangoroa 18 volana ity, noho ny lazaina fa ratram-panahy azony tamin'ny fanaovana afomanga tamin'ny fetin'ny fahaleovantenan'i Trinite sy Tobago.
Maty tao amin'ny fizaham-biby trinidadiana iray tamin'ny 6 Septambra ny kangoroa iray, nomena anarana hoe Joey, ary azo heverina ho vokatry ny ratran'ambiroa azony tamin'ny tabataban'ny fipoahana izany. Nampafana indray ny adihevitra amin'ny endrika mampisalasala ny amin'ny fizaham-biby sy ny fandotoan-tabataba ihany koa ity fahafatesan'i Joey ity.
Manerantany, lohahevitra tsy mampifanara-tsaina ny zoo — izay natao ho fampisehoana amin'ny olombelona ho fialamboly ireo biby mpirenireny tay amboalohany –. Fa manana zoo ny ankamaroan'ny firenena; ao Trinite sy Tobago ohatra, naorina tamin'ny 23 avrily 1947 ny Emperor Valley Zoo. Miorina amin'ny tany mirefy 28 327 metatra toradroa (na 2,8 ha) mifampisompirana amin'ny Queen's Park Savannah ao Port of Spain, renivohitra ity zoo ity ary mampiseho ireo karazam-biby mampinono, mandady, vorona sy trondro ao an-toerana na tsy fahita.
Vao nahazo kangoroa mena miisa efatra tamin'ny Aogositra 2019, ary samy teraka tao anaty fefy sy nobeazina manokana ho amin'io toerana io izy rehetra ireo. Rehefa maty i Joey, notondroin'ny zoo ho ny tabatabam-pipoahana nandritra ny fampisehoana afomangan'ny fahaleovantenan'ny firenena avy hatrany no nahatonga izany, fa akaiky dia akaiky ny zoo manko no nanatanterahana ny afomanga tamin'ny 31 aogositra:
Efa niresaka momba ny havesatry ny tabataba sy ny fahakaikezan'ny alin'ny afomangan'ny fahaleovantena ihany izahay. Tsy ny biby ato aminay ihany no misy fiantraikany izany fa amin'ny biby sy ny fianakaviany rehetra manerana an'i Port of Spain. Efa nahare tantara marobe izahay. Tao anatin'ny fotoana fohy nanombohan'ny afomanga izahay no efa nahatsikaritra fianjerazeram-boronkely tao anatin'ny minitra vitsivitsy sy ireo biby hafa hita ho mangovitra tanteraka. Efa niezaka ihany izahay nanao izay hampitony ireo biby ireo saingy indrisy malahelo izahay manambara fa tsy tafavoaka tamin'ny fahatafintohinana sy ny ratran-tsaina nahazo azy ny kangoroa kely lahy. Nanomboka tamin'io alina io izahay nanao izay rehetra azonay natao tamin'ireo biby. Ankehitriny tsy maintsy mbola manao bebe kokoa izahay. Manao antso ho an'ny vahoaka izahay ny handrarana tanteraka ny afomanga eto Trinite sy Tobago. Ao anatin'ireo tsy mahazaka raha mbola mitohy izany ny biby ato aminay sy ny fianakaviany.
Mitazona ireo mpanohana ny zoos fa manana anjara toerana lehibe ireo amin'ny fanabeazana, famahanana ary fikajiana karazam-biby, saingy matetika no mampivonkona sy mahaketraka ny fiainana ao anaty zoo raha oharina amin'ny fonenana voajanahary mahazatra ny biby. Fanampin'izany, mety miaina ao anaty fanirery sy indraindray fihoaram-pefy ihany koa aza ireo biby hazonina. Manandrateny amin'ny fanoherana ny zoo kosa ny People for the Ethical Treatment of Animals (PETA=Olona manohana ny fikarakarana ara-etika ny biby), ary mitatitra fa mety ho tratran'ny fepetra antsoina hoe “zoochosis” ny biby hidiana ao anaty karakara vy, fa amin'izany ry zareo no “tsy mitsahatra ny mihozohozo, mihivingivina, na mikapokapo-tongotra hatrany, ary misy aza moa ny sasany no mifandratra mihitsy”.
Rehefa miverina mankany amin'ny fanazavan'ny ao amin'ny zoo sy sasany amin'ireo mpisera media sosialy ary manontany raha mila kianina ny toeram-panidiana ireo kangoroa, dia tsikaritra ho mitovy hevitra amin'ny zoo ny ankamaroan'ny mpiserasera ary manomboka mihetsiketsika amin'ny fandraràna ny afomanga.
Lasa mihamalaza hatrany ny afomanga ao Trinite sy Tobago ary — na dia eo aza ireo fameperana isan-karazany amin'ny fampiasana izany mivelatra ao amin'ny Summary Offences Act — dia matetika ny olon-tsotra no manapoaka afomanga amin'ny fotoana manokana. Tsy araka izay takiana ao amin'ilay lalàna, fa tsy manana fahazoan-dalana ilaina akory ny ankamaroan'ireo olona mandefa afomanga (mazava tsara fa mifanohitra amin'ny fitsipiky ny fandotoana ara-tabataba ny decibels avoakany). Raha lanonam-bahoaka ahitana mazava tsara ny fotoam-panombohana sy ny fotoam-pamaranana ny afomangan'ny fetin'ny fahaleovantena, mitranga afovoan-tanàna izany, noho izany mahataka-davitra sy manjelanjelatra ny fiantraikan'ireny. Any amin'ny fari-ponenan'ny mponina sy mety haharitra ora maro kosa ny fandefasana afomanga amin'ny krismasy sy ny taombaovao.
Misy fanangonan-tsonia iray vaovao kosa any ho any mandeha fa misy fiantraikany ratsy amin'ny olona sy ny biby ny tabataba avy amin'ny afomanga, — raha eo amin'ny banky eo an-toerana dia fanakatonana ny fetra amin'ny takalom-bola vahiny — ary “fandaniam-bola vahiny tanteraka ao amin'ny FOREX koa izany ho an'i Trinite & Tobago”. Ary amin'izao fotoana anoratana (teny anglisy) izao dia efa nahazo sonia mihoatra ny 1500 io fanangonana io. Efa nisy fanangonan-tsonia iray teo aloha mba hamaranana ny fandefasana afomanga nahazo mpanohana mihoatra ny 3500, tsy isaina ny ezaka ataon'ny vondrona mpanohana biby nandritra ny taona maro.
Mihoron-koditra amin'ny fahafatesan'i Joey ny mpisera Facebook. Caroline Taylor mihevitra fa “tena ilaina indrindra ny afomanga [sy] ny fandotoam-reo hafa tsy mitabataba”, raha naneho hevitra i Caroline Lewis, “Tahaka ny akory moa ny alahelo fa tsy hianatra momba ny natiora sy ny biby ny olombelona mialoha ny hanerena ireo zavamananaina mahafinaritra ireo hiala amin'ny fonenany voajanahary ka hiaina tsy araka ny nanamboaran'ny Nahary azy!”
Mpisera Facebook Kerry Boyce nanontany raha mba azo afindra amin'ny toerana metimety kokoa aminy ny zoo, saingy nanamarika i DK Persad:
Tsy i Port of Spain ihany. Misy afomanga ihany koa any atsimon'i Trinite. Isaky ny lanonana ahatsiarovan'ny olona mandefa afomanga; Divali, krsimasy, taombaovao, karnavaly sns. Manohana tanteraka ny fandraràna afa-tsy hoe ho an'ireo tsy misy feo.
Tamin'ny 8 Septambra, nitatitra ny fampitam-baovao ao an-toerana fa nisy orinasa vahiny iray nanolotra tany mirefy 16 ha ao afovoan'i Trinite ao hamindrana ny zoo, izay nahazoana valiny somary mifanaritaka ihany.
Son Du mpisera Facebook niteny:
Not a fan of keeping animals in captivity, but if there must be a zoo, this is a less offensive possibility. And an expanded version to Central would also create jobs there. Win-win. I could only hope that the unnecessary death of a defenseless baby kangaroo could drive people on all sides of this to put their egos and agendas aside, but I ent holding meh breath.
Tsy mpankasitraka ny hanidiana ny biby, saingy raha tsy maintsy asiana ny zoo, ity no tsy mampaninona indrindra. Ary ny toeram-pialokalofana no tsara indrindra. Tokony hiteraka asa ihany koa ny famindrana mankany amin'ny toerana mivelatra kokoa any Anivontany. Samy mahazo tombony. Manantena fotsiny aho fa hitarika ny andaniny sy ny ankilany hametraka ny fitiavan-tenany sy ny paikadiny any ambadika any ilay fahafatesana tsy voatery ho nisy tamin'ilay kangoroa tsy manam-piaro.
Tany amin'ny sata antakonana nahazoana alalana ny famoahana azy eto kosa i Maria Rivas-Mc, nifantoka bebe kokoa amin'ny filàna fandraràna ny afomanga:
Tena mba noheverina tokoa ve? Fa sarotra tahaka ny ahoana ny fandraràna afomanga be? Ny tsy fanomezana tabataba azy. Ny tsy manome fanampiana ara-bola aminy? Meloka daholo ianareo rehetra. Ankoatra izay, matoky aho fa efa nisy taona maro lasa izay ny fifampiresahana amin'ny hamindrana ny Zoo ary manangana karazana tahirin-javaboary.
Manesoeso koa i Sarita Rampersad, andanin'izany:
Ka noho izany dia moramora kokoa ny manangana zoo iray hafa sy mamindra ny biby noho ny mandrara ny afomanga.
Maniry aho ry zalahy hoe nanankarena tokoa aho ka miondrika eo anatrehako ny fanaovan-dalànan'ny governemanta.